UMichael B. Jordan Uqinisekisiwe njengoMqondisi weCreed III, Usuku Lokukhishwa - Isiko Lopop
UMichael B. Jordan Uqinisekisiwe njengoMqondisi weCreed III, Usuku Lokukhishwa Okusemthethweni
UMichael B. Jordan uzobe eqondisa owesithathu Kholwa ifilimu. Kungenzeka ukuthi usevele ukuzwile lokhu ngenxa yokonakala kokulahla okuvela kuTessa Thompson kungxoxo ye-inthanethi esekude ye-2020, noma ngonyaka ngaphambili lapho kwakuthiwa ngumkhiqizi u-Irwin Winkler, kepha manje yenziwe ngokusemthethweni yi-MGM.
Lokhu kuzomela ukuqala kwe-directorial kwaseJordans.
Ngokusho kukaDeadline , ifilimu nayo inosuku lokukhishwa. Lokho kuzoba ngoNovemba 23, 2022 (bona futhi: I-Thanksgiving).
Ababili bokuqala Izinkolelo kuhlanganiswe ukwenza cishe ama- $ 400 wezigidi ebhokisini lehhovisi.
Umbhalo olandelayo uzobhalwa nguKeenan Coogler noZach Baylin, futhi uzosuselwa ohlakeni oluvela kumqondisi wokuqala Kholwa movie, URyan Coogler. Akucaci ukuthi uSylvester Stallone uzobuya yini njengoRocky.
Theres futhi kunabakhiqizi abaningi, okungukuthi: Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Jonathan Glickman, Jordan, no Ryan Coogler. Abahlonishwa njengabakhiqizi abakhulu yilaba: U-Adam Rosenberg, uSev Ohanian, noZinzi Evans.
Njengokujwayelekile, kukhishwe izitatimende ngesimemezelo.
Okokuqala ngusihlalo weMGMs Film Group, uMichael De Luca, kanye noMengameli wezinkampani ezifanayo, uPamela Abdy. Inkolo iii ijabulisa ngendlela emangalisayo futhi ngokungangabazeki izoba umnikelo obalulekile enganweni yale franchise ebekiwe. Sijabule kakhulu ukuletha i-debut yakhe yokuqondisa, futhi sabelane ngalesi sahluko esilandelayo ku Kholwa Indaba, emathiyetha ngonyaka ozayo, bathi.
Irwin Winkler, okhiqize wonke amafilimu ku- Kunamadwala futhi Kholwa ngibe nesilinganiso futhi. Angikwazi ukweqisa indlela esijabule ngayo ukuba noMichael aqondise ifilimu lesithathu ku Kholwa uchungechunge, kusho uWinkler. Ukuzibophezela kwakhe kulo mlingiswa bekuyinto engajwayelekile, futhi siyazi ukuthi lokho kuzodlulela nakwindima yakhe ngemuva kwekhamera ekuholeni kwalesi sitolimende esisha esikhulu.
ikhekhe elibomvu le-velvet kusuka ekuqaleni no-ayisikhilimu ushizi
URyan Coogler naye unamagama, athi Amafilimu kaSylvester Stallones Rocky franchise abelokhu ebalulekile kimi nasemndenini wami. Kube yinhlonipho ukusiza ukuletha i- Kholwa i-franchise yokuphila noSly, Michael, Tessa, Irwin, nawo wonke amaqembu okudala abandakanyekayo. Angizange ngijabule kakhulu ukubona uMike esihlalweni sabaqondisi esitolimeni sesithathu. Iqembu laseProximity nami sijabule ngendaba uKeenan noZach abayilungisile futhi abalindele ukuyisiza iphile.
Okokugcina (isithembiso), oh no-alsomost, uMichael B. Jordan ubenokuthile azokusho.Ukuqondisa bekulokhu kuyisifiso, kodwa isikhathi bekufanele silunge, kusho umqondisi / inkanyezi. C umhlanga III leso sikhathi - isikhathi empilweni yami lapho sengikhule ngazi kahle ukuthi ngingubani, ngiphethe i-ejensi endabeni yami, ngivuthwa ngokwami, ngikhula ngokomsebenzi, futhi ngifunda kumaGreat afana noRyan Coogler, muva nje uDenzel Washington, nezinye izingqimba eziphezulu Abaqondisi ngiyabahlonipha. Konke okubeka itafula ngalesi sikhathi. Le franchise futhi ikakhulukazi izingqikithi ze- Inkolo iii bangabantu abajulile kimi. Ngilangazelela ukwabelana ngesahluko esilandelayo sendaba ye-Adonis Creeds ngomthwalo omangalisayo wokuba ngumqondisi wayo no-namesake.
izindlela zokupheka zekhekhe elimhlophe zakudala kusuka ekuqaleni
izingubo eziphezulu zamandla omoya aphezulu
usuku olusha lokukhishwa kwejordan space jam